တုံ့ပြန်မှုများကကျွန်ုပ်တို့အားလုံး NETFLIX ပေါ်ရှိ NIGHT STALKER ကိုအတူတူကြည့်နေကြသည်ဟုသက်သေပြသည် - သတင်း
Netflix ဟာလေးပိုင်းပါတဲ့စီးရီးတွေအကြောင်းကိုပဲထုတ်ဝေခဲ့တယ် အမှတ်စဉ်လူသတ်သမားရစ်ချတ် Ramirez ထိုသို့ငါတို့ရှိသမျှသည် petrified ဖြစ်ကြောင်းပြောအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ When Night Stalker: Serial Killer အတွက် Hunt ကိုပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ကန ဦး ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှု ၎င်းသည်မည်မျှပြင်းထန်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးရာဇ ၀ တ်မှုဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
အခုကျွန်တော်တို့ကိုပိုပိုပြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအွန်လိုင်းသဘောတူညီမှုဟာအတူတူပဲ။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ဖူးသမျှကြုံတွေ့နေရသောကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးဘဝဖြစ်ရပ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ramirez သည် ၂၄ နှစ်အရွယ်တွင်သူသည် Los Angeles နှင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏လမ်းများကိုသူမလိုက်မီတစ်နှစ်ကျော်အကြာတွင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သူ၏သားကောင်များမှာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများဖြစ်ပြီးအသက် ၆ နှစ်မှ ၈၂ နှစ်အတွင်းဖြစ်သည်။
ရာဇ ၀ တ်မှုရာဇ ၀ တ်မှုတွင်လူသတ်သမားတစ် ဦး မျှထိုကဲ့သို့ပြင်းထန်စွာကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်တာ ၀ န်ယူဖူးခြင်းမရှိပါ။ မီဒီယာများအားလုံးအမှုဖွင့်ပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာဒေသကိုတိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ သားကောင်များအိပ်ပျော်စဉ်ရာဇ ၀ တ်မှုအများစုဖြစ်ပွားသောကြောင့် Ramirez ကို Night Stalker ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည် ၁၃ ဦး၊ လူသတ်မှု ၅ ခု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု ၁၁ ခုနှင့်ဖောက်ထွင်းမှု ၁၄ ခုဖြင့်တရားစွဲခံရသည်။ သူ့ကိုထောင်ဒဏ် (၁၉) နှစ်ချမှတ်လိုက်ပြီးဓာတ်ငွေ့ခန်းဖြင့်သေဒဏ်စီရင်ခဲ့သည်။
ဤတွင် Night Stalker မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စီးရီးများအားကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်နေသောခံစားမှုအနည်းငယ်ကိုသာဖော်ပြထားပါသည်။
ဒီညညမှာဆူညံသံတွေကြားပြီးတဲ့နောက် Night Stalker မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အိပ်ရာပေါ်မှာလဲနေခဲ့တယ်။ pic.twitter.com/s0HHbnaYIP
- Giselle (@itsgissel) 2021 ဇန်နဝါရီလ 14,
Night Stalker: Richard Ramirez ရိုက်ကူးထားသောလူသတ်သမားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။ …ကြည့်ရှုရမည် !! 15/10 အကြံပြုပါသည် #nightstalkernetflix pic.twitter.com/JAH35YUTxF
- Britt 🧸 (@fromNYwithluv) 2021 ဇန်နဝါရီလ 14,
ရဲရင့်တဲ့အချိန်အထိ Richard Ramirez ကိုသူ့ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးကဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်။ #TheNightStalker #NightStalker pic.twitter.com/FqlUpQ6R11
- မန်ဒါ (LivnDeadGrl87 @) 2021 ဇန်နဝါရီလ 14,
Netflix ရဲ့ Night Stalker မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက် Avia ဖိနပ်ကို ၀ တ်ထားတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တိုင်းငါတွေ့တယ် #murderino #NightStalker #nightstalkernetflix pic.twitter.com/PsM4Acu6WA
- နီကိုးလ် Abarca Powell (@MyCouchHasADent) 2021 ဇန်နဝါရီလ 14,
တစ်ခုချင်းစီကို ep အပေါ်အဆုံးသတ်ခရက်ဒစ် #NightStalker အပေါ် @netflix pic.twitter.com/AGXH41eaqV
- B E C C A (@rebeccarosecook) 2021 ဇန်နဝါရီလ 13,
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကသူ့ကိုတွေ့ရန်အသက်အရွယ်များစွာကြာခဲ့သည် #NightStalker pic.twitter.com/2yU4dngCgr
- 🪴🪐 (@ cursed886) 2021 ဇန်နဝါရီလ 14,
ငါမမူးတော့ဘူး #NightStalker ငါစစ်မှန်သောရာဇဝတ်မှုစုံထောက်ထင်ပါတယ်လို့ပဲ pic.twitter.com/wl3Yx25Mbj
- Caitmela Soprano (@CAIT_on_me) 2021 ဇန်နဝါရီလ 13,
သငျသညျငါ့ကိုtheညျ့ကွိုပြောပါသို့မဟုတ်သူသည်သွားဆရာဝန်သွားသောအခါဖုန်းကိုကောက်နှင့်ရဲကိုမခေါ်နိုင်ဘူး? ငါတစ်ခုခုလွတ်သွားသလား #TheNightStalker #NightStalker pic.twitter.com/zfQTHn2w44
- ပဲန်နီ (@lawdahhmercy) 2021 ဇန်နဝါရီလ 14,
အဆိုပါကာလအတွင်းတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်ကြီးပြင်းသူတစ် ဦး အဖြစ် #NightStalker တိုက်ခိုက်မှု, ထိုကောင်လေးမဆို '' groupies '' ခဲ့ပုံကိုငါ့ထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြက်ကခေါင်းကိုရိုက်တယ် @netflix pic.twitter.com/dzFaJR8h8M
မိန်းကလေးတစ် ဦး ထံမှအဝတ်အချည်းစည်းရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
- 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 (@UJustGotNicoled) 2021 ဇန်နဝါရီလ 14,
ငါပြီးပြီ #NightStalker ငါကြောက်တယ် pic.twitter.com/0wYXhwTmPD
- VOEMX (@vocnic) 2021 ဇန်နဝါရီလ 13,
ကျွန်ုပ်၏အရေပြားကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိစေသောတကယ့်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုမှာ Richard Ramirez ဖြစ်သည်။ ငါငန်းပြန်တယ်ပြောနေတာကြောင့်ကျော်အိပ်စက်ခြင်းဆုံးရှုံးတယ်။
ငါသာပထမ ဦး ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအပေါ်ပေမယ့် #nightstalker Netflix မှာငါ့ကိုနေ့ခင်းဘက်မှာကြည့်နေပြီးစိတ်မသက်သာဖြစ်နေတယ်။
- Kristin (@kristinhcreates) 2021 ဇန်နဝါရီလ 13,
ဤသူသည်နိုင်ငံတော်ဘဏ္treာဖြစ်သည် #NightStalker pic.twitter.com/qQRFo07ua6
- မက်ကင်ဆီဟေး (@ Hawesome94) ဇန်နဝါရီလ 15, 2021
အိုကေကိုယ့်မူးရူးကြည့် #NightStalker Netflix ပေါ်မှာအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ။ မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပေမယ့်အကြီးစီးရီး!
- ဂျော်ဒန်လုကာဂက်ဂျ် (@JordanLukeGage) 2021 ဇန်နဝါရီလ 13,
ငါအစဉ်အမြဲငါအားဖြင့်ရှိသည်ထက်တစ် ဦး ကိုအမှတ်စဉ်လူသတ်သမားများကပိုပြီးရွံရှာခဲ့ကြစဉ်းစားကြဘူး #NightStalker
- The Damo (@FistOfLemieux) 2021 ဇန်နဝါရီလ 13,
ငါအရာရှိဖရန့်နာမကိုအမှီရရန် Ramirez ရဲ့မိတျဆှေ၏မျက်နှာကိုရိုက်ချိုးနှင့်အတူလုံးဝ ok ပါပဲ။ သွားရမည့်လမ်း! #NightStalker #frankfalzon pic.twitter.com/YR4K9MF7sZ
- Tracy (@ jakesmom326) 2021 ဇန်နဝါရီလ 14,
အချစ်က #NightStalker တစ်ခုလုံးကိုရပ်ကွက်အတွင်းကသူ့မြည်းကိုရိုက်နှက်ရတဲ့အားဖြင့်ဖမ်းမိရရှိသွားတဲ့။ pic.twitter.com/GAksjNtJ17
- အိုင်ဗီ Habaradas (@ivyh) 2021 ဇန်နဝါရီလ 14,
တစ်ဝက် thru #NightStalker ... pic.twitter.com/hj55CVZh4Z
- တီယိုချို (@kaniehtiio) ဇန်နဝါရီလ 15, 2021
• American Horror Story ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် Night Stalker Richard Ramirez ပါရှိသည်